သင့် ခံစားချက်များကို ဂီတသံ များနှင့် ဖော်ပြ လိုက်ပါ
တယ်လီနောမြန်မာ၏ MyTune ဝန်ဆောင်မှုမှာ သင့်ခံစားမှုကို ဖော်ကျူးပြသနိုင်တဲ့ ဂီတသံစဉ်များကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ ခေါ်ဆိုသူနားဆင် နှင့် ကိုယ်တိုင်နားဆင် တေးသွားဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အသုံးပြုမှု ကျသင့်မည့် ဝန်ဆောင်ခများကို MyTune App ထဲတွင်လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
သင့်အကြိုက်ဆုံးတေးသွားကို သင့်ဖုန်းကို ခေါ်ဆိုသူများ နားဆင်စေနိုင်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တိုင်နားဆင်နိုင် ခြင်းတို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ဒီနေ့ပဲ ရယူလိုက်ပါ။
CRBT (ခေါ်ဆိုသူနားဆင်ဝန်ဆောင်မှု) ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်း ၃၃၃ သို့ "MT ON" ဟု စာတိုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ဖျက်သိမ်းခြင်း ၃၃၃ သို့ "MT OFF" ဟု စာတိုပေးပို့ပါ။
RRBT (ကိုယ်တိုင်နားဆင်ဝန်ဆောင်မှု) ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်း ၃၃၃ သို့ “RT ON" ဟု စာတိုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ဖျက်သိမ်းခြင်း ၃၃၃ သို့ “RT OFF" ဟု စာတိုပေးပို့ပါ။
MyTune ဝန်ဆောင်မှု အကြောင်း
MyTune App ကိုအသုံးပြုပြီး သင့်အတွက်ရော သင့်ချစ်ခင်သူများအတွက်ပါ တေးသီချင်းများကို လွယ်ကူ စွာ ရှာဖွေနိုင်ခြင်း နှင့် တေးသွားလက်ဆောင်များကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ တယ်လီနောမြန်မာရဲ့ MyTune application ကို အသုံးပြုပြီး သင့်ရဲ့ MyTune ဝန်ဆောင်မှုအကောင့်ကို လွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ ဘာသာနှစ်မျိုးလုံး နှင့် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ချစ်ခင်သူများကို တေးသွားလက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် သင့်ခံစားချက်တွေကို ဖော်ပြနိုင်ပြီနော်။
ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ တေးသွားများကို မှတ်ထားခြင်းဖြင့် နောက်တစ်ကြိမ်အတွက် လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ပါပြီ။
တယ်လီနောမြန်မာ အသုံးပြုသူများအတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
More about MyTune App
တေးသွား ၂၀,ဝဝဝ ကျော်ကို လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာရှာဖွေနိုင်ခြင်း။
MyTune app ကို အသုံးပြုပြီး အထူးသက်သာသောဈေးနှုန်း ၃၁၅ ကျပ် တည်းဖြင့် လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်သက်ရာ တေးသွားအပုဒ်တိုင်းကို ၄၅စက္ကန့် အကြိုခံစားနားဆင်နိုင်မှာပါ။
သင့်ရဲ့ MyTune ဝန်ဆောင်မှု အကောင့် setting ကို သင်နှစ်သက်သလို တစ်နေရာထဲမှာ လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။
Android ဖုန်းအသုံးပြုသူများအနေဖြင့် သင့်ဖုန်းတွင် 3G / 4G ကွန်ယက်များတွင် အသုံးပြုနို်င်ပါတယ်။
ဒေတာအသုံးပြုခ မကောက်ခံပါ။ MyTune app ကို အသုံးပြုရာမှာ ဒေတာအသုံးပြုခြင်းအတွက် ဘေလ်လုံးဝကောက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူခြင်း (သို့) တေးသွားများကို ဝယ်ယူခြင်းအတွက်သာ ဝန်ဆောင်ခကျသင့်ငွေကိုသာ ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
My Tune နေ့စဉ်သုံး အစီအစဉ်
50 Ks (Includ. Tax) for 1 Day subscription
Subscribe Send MTD to 333 *This subscription will expire after 24 hours
တေးသွားဝန်ဆောင်မှုကို ရယူခြင်း / ဖျက်သိမ်းလိုခြင်း
MyTune application ကို Download ရယူပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
MyTune ကိုရယူရန် - ၃၃၃ သို့"MT ON" ဟု စာတိုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန်- ၃၃၃ သို့ "MT OFF" ဟု စာတိုပေးပို့ပါ။
၃၃၃ ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
MyTune - တေးသွားဝန်ဆောင်မှုဆိုတာ ဘာလဲ
တယ်လီနောမြန်မာ၏ ခေါ်ဆိုသူနားဆင်တေးသွားဝန်ဆောင်မှု နှင့် ကိုယ်တိုင်နားဆင်တေးသွားဝန်ဆောင်မှု တို့ကို အသုံးပြုပြီး နှစ်သက်ရာတေးသီချင်းများဖြင့် ခံစားချက်များကို ဖော်ကျူးနိုင်ပြီနော်။ ခေါ်ဆိုသူနားဆင်တေးသွားဝန်ဆောင်မှုသည် သင့်ထံဖုန်းခေါ်ဆိုလာသော သူများအတွက် တေးသွားများကို နားဆင်စေနိုင်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တိုင်နားဆင်တေးသွားဝန်ဆောင်မှုသည် သင်ဖုန်းခေါ်စဉ် သင်နှစ်သက်တဲ့ တေးသွားများကို သင်ကိုယ်တိုင်နားဆင်နိုင်ရန်အတွက် MyTune ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
တေးသွားဝန်ဆောင်မှုက ဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုကို ပေးပါသလဲ။
အကျော်ကြားဆုံးသော မြန်မာတေးသီချင်းများနှင့် နိုင်ငံတကာ တေးသွား နှစ်သောင်းကျော်ကို MyTune မှာ ရှာဖွေရယူနိုင်ပါပြီ။ သင်နှစ်သက်ရာတေးသွားများကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီး တေးသွားဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်တဲ့ သင့်ထံဖုန်းခေါ်ဆိုသူများကို နားဆင်စေနိုင်ရန်အတွက် ခေါ်ဆိုသူနားဆင်တေးသွားဝန်ဆောင်မှုကို ရယူခြင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း (သို့) သင်ကိုယ်တိုင်နားဆင်ရန်အတွက် ကိုယ်တိုင်နားဆင် တေးသွားဝန်ဆောင်မှုအား ရယူခြင်း တို့ကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပြီးနောက် နှစ်သက်ရာတေးသွားများကို ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးကိုလည်း တစ်ပြိုင်တည်း ရယူနိုင်ကာ တစ်ခုစီအတွက် အပတ်စဉ်ဝန်ဆောင်မှုခကို ကောက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်တေးသွားများကို သင့်ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ထဲတွင် အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။
ခေါ်ဆိုသူနားဆင်တေးသွား ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာဘာလဲ။ ကိုယ်တိုင်နားဆင်တေးသွားဝန်ဆောင်မှုဆိုတာဘာလဲ။
ခေါ်ဆိုသူနားဆင်တေးသွားဝန်ဆောင်မှုသည် သင့်ထံဖုန်းခေါ်ဆိုလာသော သူများအတွက် တေးသွားများကို နားဆင်စေနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်နားဆင်တေးသွားဝန်ဆောင်မှုသည် သင်ဖုန်းခေါ်စဉ် သင်နှစ်သက်တဲ့ တေးသွားများကို သင်ကိုယ်တိုင်နားဆင်နိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တယ်လီနောမြန်မာမှ ခေါ်ဆိုသူနားဆင်ဝန်ဆောင်မှု နှင့် ကိုယ်တိုင်နားဆင်ဝန်ဆောင်မှု နှစ်မျိုးလုံးကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ MyTune ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူပြီးသည့်နောက် တေးသွားပေါင်း ၂၀,ဝဝဝ ကျော်ထဲမှ နှစ်သက်ရာတေးသွားများကို ရှာဖွေဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
MyTune ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုရယူနိုင်ပါလဲ? ဘယ်လိုဖျက်သိမ်းနိုင်ပါသလဲ?
MyTune ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုရန် နှင့် ဖျက်သိမ်းရန်အတွက် အောက်ပါနည်းများအတိုင်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
MyTune app: MyTune app ကို ဒေါင်းလော့ခ် ရယူခြင်း နှင့် application ကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ဒီလင့်ခ်ကို နှိပ်ပါ။ https://goo.gl/sqPMXA
SMS: MyTune ဝန်ဆောင်မှုကို SMS မှတဆင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်း (သို့) ဝန်ဆောင်မှုကို ဖျက်သိမ်းနိုင်ရန်အတွက် ၃၃၃ သို့ အောက်ပါနည်းအတိုင်းပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
- ခေါ်ဆိုသူနားဆင်ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူရန်: MT ON ဟုရေးကာ ၃၃၃ သို့ပေးပို့ပါ။
- ခေါ်ဆိုသူနားဆင်ဝန်ဆောင်မှုကို ဖျက်သိမ်းရန်: MT OFF ဟုရေးကာ ၃၃၃ သို့ပေးပို့ပါ။
- ကိုယ်တိုင်နားဆင်ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူရန်: RT ON ဟုရေးကာ ၃၃၃ သို့ပေးပို့ပါ။-
- ကိုယ်တိုင်နားဆင်ဝန်ဆောင်မှုကို ဖျက်သိမ်းရန်: RT OFF ဟုရေးကာ ၃၃၃ သို့ပေးပို့ပါ။
IVR: ၃၃၃ သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ညွှန်းဆိုချက်များကို နားဆင်ပြီး တေးသွားများကို နာဆင်နိုင်ပါတယ်။ ခေါ်ဆိုခမှာ အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ခေါ်ဆိုသူနားဆင်ဝန်ဆောင်မှု (သို့) ကိုယ်တိုင်နားဆင်ဝန်ဆောင်မှုမှာ အသုံးပြုရန် တေးသီချင်းများကို ဘယ်လိုဝယ်ယူရမလဲ
အကျော်ကြားဆုံးသော မြန်မာတေးသီချင်းများနှင့် နိုင်ငံတကာ တေးသွား နှစ်သောင်းကျော်ကို MyTune မှာ ရှာဖွေရယူနိုင်ပါပြီ။ အောက်ပါလင့်ခ်များတွင်လည်း ရှာဖွေဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
MyTune app: MyTune app ကို ဒေါင်းလော့ခ် ရယူခြင်း နှင့် application ကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ဒီလင့်ခ်ကို နှိပ်ပါ။ https://goo.gl/sqPMXA (MyTune app ကို အသုံးပြုပုံနှင့် ဒေါင်းလော့ခ်ပြုလုပ်ခြင်းများကို အောက်တွင် MyTune app နှင့် သက်ဆိုင်သည့် မေးခွန်းများတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။)
- ကိုယ်တိုင်နားဆင်ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူရန်: RT ON ဟုရေးကာ ၃၃၃ သို့ပေးပို့ပါ။
MyTune ဝန်ဆောင်မှုမှ သင့်ချစ်ခင်သူ သူငယ်ချင်းများကို တေးသွားလက်ဆောင်ပေးရာတွင် အောက်ပါနည်းလမ်းများမှ ရွေးချယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ အဆင့် ၁: ရွေးချယ်ထားတဲ့ တေးသွားမှ လက်ဆောင်ပေးမည့် ခလုပ်ကို နှိပ်ပါ။ အဆင့် ၂: သင်လက်ဆောင်ပေးလိုသည့် ဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်ရန်အတွက် Pop-up တွင် အသေးစိတ်သိသင့်စရာ အချက်များကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဆင့် ၃: ပထမ ဖုန်းနံပါတ် ဖြည့်ပြီးနောက်တွင် လိုအပ်သည့် ပြုလုပ်မှုများအတွက် အကြောင်းကြားအသိပေးသည့် Pop-up ထပ်မံမြင်ရပြီးနောက် သင်ဘက်မှ အောင်မြင်စွာ တေးသွားလက်ဆောင်ပေးပြီးပါပြီ။ ၃၃၃ မှလည်း သင် မည်သည့်ဖုန်းနံပါတ်သို့ လက်ဆောင်ပေးပြီးကြောင်းကို SMS ဖြင့်လည်း ထပ်မံအတည်ပြုပေးပါမည်။
အဆင့် ၁: ဝယ်မည် ဆိုတဲ့ ခလုပ် ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် ၂: ရွေးချယ်ထားသည့် တေးသီချင်း၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ဖော်ပြထားသည့် Pop-up ကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။
အဆင့် ၃: ဝယ်မည် ဆိုသည့် ခလုပ်ကို နှိပ်လိုက် ပါက နောက်ထပ် သင် အမှန်တကယ်ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ထပ်မံအတည်ပြုပြီးပါက အောင်မြင်စွာ ဝယ်ယူပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် 333 မှလည်း သင် အောင်မြင်စွာ ဝယ်ယူပြီး ဖြစ်ကြောင်းကို ထပ်မံအတည်ပြု လက်ခံရရှိမည် ဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုက်တဲ့ တေးသီချင်း ကို ဘယ်လိုမှတ်ထားရပါသလဲ
အဆင့် ၁: သင်အကြိုက်ဆုံးသော တေးသွားများကို ရွေးချယ်ပြီး နှိပ်လိုက်ပါက တေးသွားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပြသည့် Pop-up ကို တွေ့ရပါမည်။
အဆင့် ၂: Favorite ခလုပ်ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် ၃: ထို့နောက် သင်ရွေးချယ်ထားသော တေးသီချင်းကို သင်၏ ကိုယ်ပိုင် Favorite မှာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
MyTune ဝန်ဆောင်မှုမှ သင့်ချစ်ခင်သူ သူငယ်ချင်းများကို တေးသွားလက်ဆောင်ပေးရာတွင် အောက်ပါနည်းလမ်းများမှ ရွေးချယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
အဆင့် ၁: ရွေးချယ်ထားတဲ့ တေးသွားမှ လက်ဆောင်ပေးမည့် ခလုပ်ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် ၂: သင်လက်ဆောင်ပေးလိုသည့် ဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်ရန်အတွက် Pop-up တွင် အသေးစိတ်သိသင့်စရာ အချက်များကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဆင့် ၃: ပထမ ဖုန်းနံပါတ် ဖြည့်ပြီးနောက်တွင် လိုအပ်သည့် ပြုလုပ်မှုများအတွက် အကြောင်းကြားအသိပေးသည့် Pop-up ထပ်မံမြင်ရပြီးနောက် သင်ဘက်မှ အောင်မြင်စွာ တေးသွားလက်ဆောင်ပေးပြီးပါပြီ။ ၃၃၃ မှလည်း သင် မည်သည့်ဖုန်းနံပါတ်သို့ လက်ဆောင်ပေးပြီးကြောင်းကို SMS ဖြင့်လည်း ထပ်မံအတည်ပြုပေးပါမည်။
ကိုယ်ပိုင် MyTune အကောင့်ကို ဘယ်လိုပြုပြင်လို့ရပါသလဲ
MyTune app ကို အသုံးပြုပြီး အခြားတေးသီချင်းဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာများကို အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ပရိုဖိုင် ဓာတ်ပုံကို upload ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင်ဝယ်ယူထားသော တေးသီချင်းများကိုလည်း ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
သင်ဝယ်ယူထားသော တေးသီချင်းများ၏ ဝယ်ယူထားသည့် အချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုလည်း စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
သင်ရယူထားသည့် ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်သော ခေါ်ဆိုသူနားဆင်တေးသွားဝန်ဆောင်မှု (သို့) ကိုယ်တိုင်နားဆင်ဝန်ဆောင်မှု တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့် ကျသင့်ငွေ ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ခေါ်ဆိုသူနားဆင်ဝန်ဆောင်မှုတွင် သင့်ထံဖုန်းခေါ်သူများကြားနိုင်ရန်အတွက် တေးသွားများကို ပြင်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်နားဆင်ဝန်ဆောင်မှုတွင် သင်ဖုန်းခေါ်စဉ် သင်ဝယ်ယူထားသည့်တေးသွားများကို ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။